ပို့ကုန်/သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်အား Update ပြုလုပ်ရန် အသိပေးကြေညာ | Commerce
ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီ များ အက်ဥပဒေ ၁၉၁၄၊ ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ် အထူးကုမ္ပဏီအက် ဥပဒေတို့အရ ဖွဲ့စည်းမှတ်ပုံတင်ထားသော ကုမ္ပဏီများမှ ပြည်ပနှင့် ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အလို့ငှာ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် များအား ခွင့်ပြုထုတ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ပြဋ္ဌာန်း ခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများ ဥပဒေအသစ်ပါပြဋ္ဌာန်းချက် အရ အီလစ်ထရွန်နစ်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စနစ် (MyCO)ဖြင့် ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများ ညွှန် ကြားမှုဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ထားရာ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်း ရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်များအား ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရေးအတွက် ပို့ကုန် သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်းကိစ္စကို သတင်းလွှာ (၆/၂၀၁၈) ဖြင့် အသိပေးကြေညာခဲ့ပါသည်။
ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ပို့ကုန်သွင်းကုန် လိုင်စင်/ပါမစ်ထုတ်ပေးသည့် စနစ်အား Myanmar Tradenet 2.0 စနစ်အဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင် ရွက်လျက်ရှိရာ ကုန်သွယ်မှုဆက်စပ်ဌာနများဖြစ်သည့် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ အကောက်ခွန် ဦးစီးဌာန၊ ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီး ဌာနနှင့် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ စသည့်ဌာနများအတွင်း အခြေခံ အချက်အလက်များအား ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်မှ စတင်၍ တူညီစွာ အသုံးပြုနိုင်ရေး၊ Single Entry ဖြစ်ရေး၊ Single Registration Number အသုံးပြုနိုင်ရေးတို့အတွက် အတည်ပြု ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ရာ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်တွင် (MyCO Online) စနစ်ဖြင့်ရရှိခဲ့သော ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ် TIN No.(9 digit) ပြောင်းလဲလျှောက်ထားခဲ့ခြင်း မရှိသည့် ကုမ္ပဏီများ အနေဖြင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်နေ့ ကျော်လွန်ပါက ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ဆက်စပ်သည့် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းရှိမည်မဟုတ်ပါ။
ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ ၂၀၁၇ အရ အီလက်ထရွန်နစ်ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင်စနစ်ဖြင့် ပြန်လည်မှတ်ပုံ တင်ပြီးသော ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်း များ ဆက်လက်လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက MyCO Online စနစ်ဖြင့် ရရှိခဲ့သော ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ်TIN No.(9 digit) အား ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက် မှတ်ရှိ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် အမှတ်နေရာတွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက် နောက်ဆုံးထား၍ ပြင်ဆင်ခြင်းလျှောက် ထားကြရန်ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ သတ်မှတ်ကာလဖြစ်သည့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်အထိ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံ တင်လက်မှတ်ရှိ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ် TIN No.(9 digit) အား ပြင်ဆင်ခြင်းမရှိသည့် ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်များအား မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လိုပါက ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင် အသစ် ပြန်လည်လျှောက် ထားရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။